အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရာတွင် သတိပြုသင့်သောအချက်များ - YOYARLAY Digital Media and News
Published: August 10, 20194:44 pm
စာရေးသားရာမှာ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေအများကြီးပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရာမှာတော့ သတိပြုသင့်တာတွေက ပိုများပါတယ်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာရေးရတဲ့ essay, letter ကနေစပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရေးရတဲ့ အစီရင်ခံစာ၊ အီးမေးလ်တွေအဆုံး ဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားပဲရေးရေး သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်တချို့ကို စုစည်းဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကြောင်း၊ စကားလုံးကြွယ်ဝကြောင်းကိုပြချင်တဲ့အနေနဲ့ အလွယ်တကူဖတ် ရ၊ နားလည်ရခက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမသုံးဖို့က အရေးအကြီးဆုံးအချက် ဖြစ် ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာဟာ တစ်ဘက်သားကအလွယ်တကူနားလည်လောက်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့ စကားဆက် တွေအများကြီးနဲ့ရေးတာမျိုး၊ အခက်ဆုံးစကားလုံးတွေသုံးပြီးရေးပြတာမျိုးတွေကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
(၂) Quotes တွေ၊ ဥပမာတွေ မသုံးပါနဲ့
စကားပြေအရေးအသားအဖြစ် တစ်ဘက်သားကို တင်ပြပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကိုးအကား Quotes တွေကို တိုက်ရိုက်ရေးထည့်တာမျိုး၊ ဥပမေယျတွေသုံးပြီး ရှင်းပြတာမျိုးဟာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရတဲ့ စကားပြေတွေမှာမသုံးသင့်ပါဘူး။
စာရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ရဲ့မေးခွန်းကို စာဖတ်သူက တိုက် ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Have you ever…? , What do you think about…? အစ ချီတဲ့မေးခွန်းတွေကို စာရေးသားတဲ့အခါ မမေးမိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) စာပိုဒ်လေးတွေ ခွဲခွဲပြီးရေးပါ
ဒီအချက်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုစာမျိုးပဲရေးရေး စာပိုဒ်လေးတွေခွဲပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစီအစဉ်တကျရေးသားသင့်တာပေါ့။ ဒါမှ ဖတ်ရတဲ့သူက ရှင်း ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်မယ့်အပြင် ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်း သဲသဲကွဲကွဲ ပြောပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) နိဒါန်းနဲ့ နိဂုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးပါ
စာတစ်ပိုဒ်လုံးရဲ့အသက်ဟာ နိဒါန်းနဲ့ နိဂုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုဖတ်ရင်တော့ တစ်အုပ်လုံးမဖတ်ဖြစ်ရင် အစနဲ့ အဆုံးကိုတော့ လှန်ကြည့်ကြတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီတော့ စာရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ နိဒါန်းကို ဆွဲဆောင် မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြှင့်တင်သင့်သလို နိဂုံးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးအသားစွမ်းရည်မလျှော့သင့်ပါဘူး။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အခြေခံအချက် (၅) ခုနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးသောအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီဆောင်းပါးကို ရိုးရာလေးရဲ့မိတ်ဖက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်း Wall Street English ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Ref: Wall Street English
Previous Previous post: ညအိပ်ရာဝင်နောက်ကျသူတွေဟာ ပိုပြီးဉာဏ်ကွန့်မြူးတတ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်
Next Next post: ခရီးသွားခြင်းနှင့် ခေါင်းမူးဝေခြင်း
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ခြင်တွေဝိုင်းတွယ်တာ ဘာကြောင့်လဲ
ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေထဲမှာရော ဒီလိုခံစားနေရတဲ့ လူရှိလား။ ထိုင်နေတဲ့လူချင်းအတူတူ ကိုယ့်ဆီပဲ ခြင်တွေလာကိုက်တာမျိုးလေ။ ခြင်ကြိုက်တဲ့ သွေးအမျိုးအစားမို့လို့ တချို့ကပြောကြတယ်။ မသိရင်တော့Twilight ကားထဲက မင်းသမီးလိုပေါ့ (ဟဲဟဲ) ဗန်ပိုင်းယား ခြင်တွေ သွေးလာစုပ်ကြတာလေ…စတာပါ။ ခြင်မတွေက ခြင်ဥပေါက်ဖို့ လူသွေးကို ပိုလိုအပ်ကြပါတယ်။…
Published: June 8, 20182:36 am Updated: July 3, 20202:43 pm
ချွေးထွက်ရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ လုံလောက်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား
လူတော်တော်များများက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အခါ ချွေးထွက်ရင် work outလုပ်တာ ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက ချွေးတွေရွဲနစ်နေရင်တောင် work outလုပ်တာမပြီးသေးဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ တကယ်ကော ချွေးထွက်ပြီဆိုရင် ကောင်းကောင်း work out လုပ်ဖြစ်တယ်လား။ work out…
Published: October 2, 20194:41 pm
ကျွန်တော်တို့လိုလူသားတွေ လိုအပ်တဲ့ အနားယူခြင်း (၇) မျိုး
Published: November 6, 20205:31 pm